Lanja Miakatra “Saimbolika” Azon’i Palestina Ao Amin’ny Firenena Mikambana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2012 15:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, 한국어, Ελληνικά, اردو, 繁體中文, 简体中文, srpski, English
@livefromgaza: Tsy Ramallah no renivohitro, Jerosalema no izy. Ary Palestina IRAY manontolo no tanindrazako. TSIA amin'ny #Palestine194
@Abou_Charlie: Inona no ilàna ny #Palestine194? amin'ny Palestinianan'ny taona 48? amin'ny Palestiniana monina amoron'i Jordana? amin'ny Palestiniana ao Gaza? amin'ny mpialokaloka Palestiniana?
@Abou_Charlie: Tsarovy fa izao no fototra, tolon'ny mpialokaloka ny tolona Palestiniana. Mifarana eo amin'ny zon'ny mpialokaloka ny tolonay. #Palestine194
@ASE: Izany hoe, Manaiky an'i Palestina ho fanjakana ny Firenena Mikambana amin'ny fotoana hanekeny ihany koa fa mibodo an'i Amoron'i Jordana sy Gaza i Isiraely. Hmm.
@UN_PGA: Ny firotsahan'i #Palestine dia neken'ny @UN #UNbid Eny – 138, Tsia – 9, tsy naneho hevitra – 41 pic.twitter.com/6wD4EbgT
Ireo firenena manohitra ny fitsapa-kevitra dia Isiraely, Kanada, Nauru, Palau, Nosy Marshall, Micronesia, Panama, ny Repoblika Czech ary i Etazonia – izay ahafahan'ny mpiserasera mianatra momba ny firenena sasany tsy mbola reny mihitsy hatramin'izay.
@mayanorton: Ity no mba ahenoako amin'ny gazety izany Nauru, Palau, ny nosy Marshall & Micronesia. tahaka ny fanambarana an-gazety izy ity.
@muiz: Ny FM no fanazavana lehibe amin'ny fahafoanan'ny teny sy ny fihetsika azo tsapaintanana. Tena maro tokoa ny fanohanana am-bava an'i #Palestine – tena kely tokoa ny hetsika azo tsapain-tanana
@ArabVoicesSpeak: Hijoro any amin'ny toerana ratsy ao amin'ny tantara tahaka ny hita matetika i Etazonia #UNBID
@AlOraibi: Tsy mampino ny filoha ejipsiana nisafidy ny hitafatafa mandritra ny fotoana hanaovana fifidianana momba an'i Palestina! Miresaka zavatra tsy azo ekena
Kabarin'i Abbas ao amin'ny Firenena Mikambana nojerena teo amin'ny rindrina mampisaraka an'i Isiraely tao Bethlehema. Saripikan'i @georgehale hita Twitter
@georgehale: Sary – Sehatra tao Bethlehema izay nijerena ny kabarin'i Abbas tao amin'ny Firenena Mikambana natao tamin'ny rindrin'Isiraely pic.twitter.com/sUTT6KjQ
Fankalazana tao Ramallah. Saripika nozarain'ny @RZabaneh tao amin'ny Twitter
@RZabaneh: Ary mitohy ny fetin'ny #UNBid ao Ramallah: Mihiakam-pifaliana amin'ny feon'ny “i3linha ya sh3bi” [Dika: Lazao izany, Ry Oloko]. Saripika: pic.twitter.com/CN5XYZgo
@Dima_Khatib: Raha tsy jerena ny fahombiazan'ny #UNBid: fanohanana mahafinaritra ho an'i Palestina avy amin'ny ankamaroan'ny firenena manerantany, manohitra ny sitrapon'i Isiraely/Etazonia
@ibnezra: Ao amin'ny firenena tokony ho 7 tapitrisa, manodidina ny 500 ny Isiraeliana no nanao fihetsiketsehana, ao Tel Aviv, amin'ny fanaovana an'i Palestina ho Fanjakana ao amin'ny Firenena Mikambana.
@ibnezra: Farany: Tezitra i Vatikana fa hanitsakitsaka tsy ho ela ny sata manokana ananany ao amin'ny Firenena Mikambana i Palestina
Raha te-hahita resadresaka bebe kokoa, amarino amin'ny alalan'ny tenifototra #Palestine194 sy #UNBid.